CMO-on-the-go: Ahoana ny fomba ahazoan'ny mpiasa Gig tombony tombony ny departemantan'ny varotrao. Martech Zone
Ny salanisan'ny faharetan'ny CMO dia mihoatra ny 4 taona—Ny fohy indrindra ao amin'ny C-suite. Nahoana? Miaraka amin'ny tsindry hahatongavana amin'ny tanjona kendrena dia manjary manaraka ny tsy azo ihodivirana ny fandorana. Eo no miditra ny asa gig. Ny maha CMO-on-the-Go dia mamela ny Lehiben'ny mpivarotra hametraka ny fandaharam-potoanany ary handray izay fantany fa hainy ihany, ka miteraka asa avo lenta sy vokatra tsara kokoa ho an'ny farany ambany.
Na eo aza izany, manohy mandray fanapahan-kevitra stratejika mitsikera ny orinasa nefa tsy mahazo tombony amin'ny fomba fijerin'ny CMO, na eo aza ny fahaiza-manao amin'ny fampitomboana ny vola miditra amin'ny orinasa entin'izy ireo. Teo no nidiran'ny mpiasa gig an'ny ekipa mpanatanteraka. Izy ireo dia afaka miasa ho CMO ho an'ny marika amin'ny tapa-potoana, mitahiry marika ny vidin'ny fandraisana CMO izay mety ho eo mandritra ny taona vitsivitsy monja.
Ny gig gig CMO dia tsy mitovy amin'ny consultant; izy io dia mitaky fifandraisana amin'ny C-suite sy ny tabilao ho ampahany amin'ny ekipa, miaraka amin'ny fidirana lalina amin'ny asa isan'andro. Amin'ny maha CMO mandray anjara amin'ny toekarena gig ahy dia manana andraikitra aho izay taratry ny CMO amin'ny fotoana feno. Mitarika ekipa marketing aho hahatratra tanjona stratejika ary hanao tatitra amin'ny CEO. Ataoko amin'ny ampahany fotsiny. Tahaka ireo mpiasa toekarena gig maro, nahita asa aho tamin'ny alàlan'ny tamba-jotra nifandraisako fony aho teo amin'ny lalan'ny asa nentim-paharazana, anisan'izany ny CMO sisan'ny Abuelo, ny departemanta cookie ary ny hafa.
Fa maninona ny mpiasa gig?
Ny iray amin'ireo fanontaniana napetraka matetika napetraka tamiko dia ny: Inona no entin'ny mpiasa gig ho an'ny departemanta marketing? Tombontsoa lehibe iray dia ny fandefasan'ny mpiasa gig ny heviny vaovao rehefa miditra amin'ny ekipa mpiasa maharitra izy. Ity fandaminana ity dia manome ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa - "maso vaovao" avy amin'ny fahalalana vaovao sy andrim-panjakana avy amin'ny ekipa maharitra.
Araka ny PayScale, ny karama mediana ho an'ny CMO dia $ 168,700. Orinasa maro, fanombohana indrindra, tsy afaka manakarama olona amin'izany karama izany amin'ny fotoana feno, fa ny gig CMO dia afaka mitondra traikefa sy fitarihana taona maro mitovy amin'ny vidiny ambany kokoa. Raha ny ekipa mpivarotra maharitra dia manohitra ny fakam-panahy hitondrana ny gig CMO ho toy ny olona any ivelany ary mampiditra ny ampahany amin'ny fanapahan-kevitra rehetra mifandraika amin'izany, ny orinasa dia hahazo tombony feno amin'ny matihanina za-draharaha sy mahay raha tsy misy ny vidiny lafo.
Tombony iray hafa dia ny fandaminana gig dia ahafahan'ny orinasa sy ny mpanatanteraka manandrana mitondra fiara maharitra. Na dia maro aza ireo mpiasa gig (toa ahy) no afa-po tanteraka amin'ny fiasana amin'ny fifanarahana ary manome lanja ny fahaleovan-tena sy ny karazany, ny hafa kosa mety ho faly amin'ny fahatongavany amin'ny fotoana feno ho an'ny toerana mety. Fandaminana gig dia ahafahan'ny roa tonta mizaha izany alohan'ny hanaovana fanekena.
Torohevitra ho an'ireo CMO mitady hanao ny tetezamita
Raha CMO ianao ary manomboka mahatsiaro tena ho may, mety fotoana izao hijerena ny fomba ahafahanao mitondra ny fahaizanao mivarotra amin'ny orinasa amin'ny fifanarahana. Mankanesa any amin'ireo mpiara-miasa taloha ary ampahafantaro azy ireo fa liana amin'ny asa gig ianao. Aza adino ny mampiditra mpivarotra ao amin'ny faritry ny asa fitoriana - mazàna izy ireo dia mahita ao anatiny ireo fikambanana marobe ary afaka manome fitarihana rehefa mivoaka amin'ny toerana malalaka ny fivoahan'ny fahefana mpanatanteraka.
Ny iray amin'ireo sakana lehibe voalaza amin'ny asa tsy miankina dia ny fidiram-bola tsy azo vinavinaina. Alohan'ny handraisana ny anjaranao dia alao antoka fa vonona ianao amin'ny volan'ny vola sy ny onja izay tsy maintsy ihodivirana amin'ny asa tsy miankina. Hamarino tsara fa voaomana ara-bola sy ara-pihetseham-po ianao handroso mialoha mandritra ny fotoana mahia. Rehefa miditra amin'ny toekarena gig ny matihanina amin'ny marketing dia mety ho fiainana mahafa-po sy mahafa-po tokoa izy io.
Rehefa mandray ny tombony azo avy amin'ny fanakaramana ireo mpitantana marketing tsy miankina ny fikambanana dia mety hahasoa azy roa tonta ny fifandraisana. Ny Gig CMOs dia afaka manome fomba fijery vaovao, fahaiza-manao mora ary fiantraikany tsara amin'ny farany ambany. Etsy ankilany, ny mpiasa gig dia manana fahalalahana, asa manome valiny ary tsy dia may loatra.
Tags: lehiben'ny bizina marketingcmocmo karamacmo eo am-pandehananagig economympiasa gig
Famakiana ny sakana: Ahoana ny fomba hahitanao ny dokao, kitihina ary hanaovan-tsonia